» हेटौँडाकी सन्ध्यालाई ‘छमछमी’ को विजेता बनाउन यसरी भोट गरौँ (भिडियो)
हेटौँडाकी सन्ध्यालाई ‘छमछमी’ को विजेता बनाउन यसरी भोट गरौँ (भिडियो)
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १८:१६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २२ साउन । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ कमाने निवासी सन्ध्या आचार्य नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने मेगा डान्स रियालिटी शो ‘रियो छमछमी सिजन ४’ को उत्कृष्ट १२ मा पुग्न सफल भएकी छिन् । हेटौँडामा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सृजना कला केन्द्रमा नृत्य प्रशिक्षण लिँदै गरेकी सन्ध्याले देशभरीका २० हजारभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट १२ मा स्थान सुरक्षित गरेकी हुन् । उत्कृष्ट १२ मा पुगेकी उनले छमछमीको यो सिजन जित्ने ठूलो सम्भावना समेत छ । यही साउन १८ गते नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको छमछमीको पछिल्लो श्रृङ्खलादेखि भोटिङ लाईन खुला छ ।
सन्ध्याले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफु उत्कृष्ट १२ मा पुग्न सफल भएको बताउँदै सर्वाधिक भोट गरिदिनका लागि आग्रह गरेकी छिन् । उनलाई भोट गर्न म्यासेज बक्समा cc 08 टाईप गरी 31009 मा पठाउनुपर्ने छ । हेरौँ भिडियो–
‘सन्ध्या–बहुमुखी प्रतिभाकी धनी’
सन्ध्या नृत्यमा जति अब्ब्ल छिन् त्यति नै खेलकुदमा पनि सक्रिय छिन् । बुवा विष्णुप्रसाद आचार्य र आमा आसादेवी आचार्यका जेठी छोरीका रुपमा जन्मिएकी सन्ध्याकी एक बहिनी पनि छिन् । आधा दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुका साथै विभिन्न व्यवसायिक विज्ञापनहरुमा समेत अभिनय गरेकी सन्ध्या विज्ञानकी विद्यार्थी पनि हुन् । उनी हेटौँडा २ मा अवस्थित मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा बि.एस.सी. तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।
उनी नृत्यमा मात्र होईन खेलकुदमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । मकवानपुरकी चर्चित एथलेटका रुपमा चिनिने उनले मकवानपुर जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा धेरै पटक स्वर्ण पदक तथा कास्य पदक पनि जितेकी छिन् । उनले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत ३ पटकसम्म सहभागीता जनाई सकेकी छिन् । मकवानपुर जिल्लाबाट प्रतियोगितामा अडिसन दिएका १ सयभन्दा बढी सहभागीमध्ये उनी उत्कृष्ट १२ मा पुग्न सफल भएकी हुन् । छमछमीको तेस्रो सिजनमा पनि उत्कृष्ट ५० सम्म पुग्न सफल भएकी उनले यो वर्ष भने टाईटल जित्ने सम्भावना समेत रहेको दर्शकहरु बताउँछन् । यस अघि पनि मकवानपुरको मनहरी निवासी सरोज राना प्रजाले छमछमीको तेस्रो सिजन जितेका थिए । सन्ध्या यो यात्रालाई दोहोराउने सुरमा छिन् । त्यसैले हामी सबै मिलेर सन्ध्यालाई भोट गरौँ ।
मुटुदेखि मुटुसम्म भाग–५ प्रेम कहिल्यै मर्दैन
भोईस अफ नेपालको फाईनलमा को पुग्ला ?
बद्री र प्रितीसँग कमला, आयुशा र सचिनको कडा दोहोरी भिडन्त
भोईसको स्टेजमा ज्वाला जस्तै चम्किँदै ज्वाला राई
गायक मातृका आचार्यको ‘गुरु बन्दना’ सार्वजनिक
सोनाम शेर्पा चर्चाको शिखरमा
तारा श्रीस मगर फाईनलको नजिक